Ilaha Gaadiidka Kale ee Google Analytics? | Martech Zone
Sabti, Febraayo 14, 2009 Sabti, Febraayo 20, 2016 Douglas Karr
Toddobaadkan shaqada, mid ka mid ah macaamiisheena ayaa weydiinayey waxa ay "kale" ilaha taraafikada ee Google Analytics (GA).
Ma jiro faahfaahin aad u badan oo ku saabsan isugeynta dhabta ah ee Google Analytics sidaa darteed waa inaad qodid xoogaa ah. Meelaha taraafikada ayaa sidoo kale loo yaqaan dhexdhexaad gudaha GA. Waxoogaa qodis ah ayaan sameeyay waxaanan ogaaday in Google Analytics ay si toos ah toos ugu dhexdhexaadinayso dhexdhexaadiyaal kale, midka ugu caansan email.
Si aad u hesho liiska qalabka kale, waxaad u baahan tahay inaad gujiso ilaha taraafikada> Dhammaan ilaha taraafikada. Tani waxay ku siin doontaa liiska dhammaan ilahaaga taraafikada iyo sidoo kale dhexdhexaadinta.
Waxaa jira hoos u dhac halka aad ku kala shaandheyn karto dhexdhexaadka dhabta ah, sidoo kale, si aad u muujiso dhammaan ilaha kale ee taraafikada.
Tani waxay noqon kartaa qalab aad waxtar u leh. Hadaad isticmaaleyso email marketing inaad dib ugu celiso taraafikada boggaaga, waad cabbiri kartaa sida ugu wanaagsan ee aad wax u qabanayso adoo ku daraya 'querystring' oo qeexaya habka:
http://martech.zone?utm_medium = iimayl
Waxaa jira xadad yar oo la heli karo haddii aad rabto cabbiro ololahaaga.
Tags: Analytics googleisha kale ee taraafikadaisha taraafikadautm_medium
Feb 14, 2009 markay ahayd 4:07 PM
Kaliya waxaan arkay tan maalmo kahor mana ogaan karin. Hadda waan ogahay sida… mahadsanid!
Feb 14, 2009 markay ahayd 11:26 PM
Waan arkay tan laakiin waligay fikir badan ma siinin. Taasi waa talo fiican inkastoo. Waxaan qorsheynayaa in aan yeesho kaambeyn emayl ah sidaa darteed koodhkani waa mid anfacaya.
Febraayo 15, 2009 saacadu markay tahay 2: 15 AM
Waad ku mahadsan tahay tilmaanta weyn! Waxaan la ciyaari doonaa liiskan hoos u dhaca marar badan hadda now
Feb 15, 2009 markay ahayd 2:00 PM
Farxad maqaalkaygu wuu caawin karaa!
Febraayo 18, 2009 saacadu markay tahay 8: 15 AM
Wax ku ool ah waxaa jira waxyaabo badan oo nalagu fahmayo ilahaan taraafikada. Waxaan u adeegsan karnaa qaybaha si aan u kala saarno taraafikada Organic iyo kuwa aan dabiici ahayn ee ka imanaya matoorada raadinta taas oo ku timaadda waqtiga. Wax badan ka badal GA!
May 7, 2009 at 2: 55 PM
Waad ku mahadsan tahay tilmaanta weyn! Miyaan ku ciyaari doonaa liiskan hoos u dhaca badanaa marar badan hadda?
Apr 21, 2011 at 1: 17 PM
Hey Doug - waad ku mahadsan tahay qoraalka. Waxaan arkay tan "Kale" oo sii kordheysa usbuucii hadana waan fahmay waxa dhacaya.
Apr 21, 2011 at 1: 20 PM
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awoodno inaan caawinno, Steven!
Agoosto 15, 2011 saacaddu markay ahayd 9:32 PM
laakiin ma jirtaa wado lagu raaco iskuxirka google Analytics ilaa isha taraafikada. Waxa igu soo kordhay booqashooyin badan oo ka imanaya isha taraafikada laakiin ma aqoonsani mana ka heli karo shabakada?
Agoosto 15, 2011 saacaddu markay ahayd 10:22 PM
Haa, runtii waad awoodaa laakiin waa xoogaa xanuun ah. Waa inaad gujisaa cinwaan kasta oo tixraac ah si madaxbannaan ka dibna waxaad arki doontaa jidka buuxa ee gudbinta. Ku lifaaqan waa shaashad shaashad ah (oo leh qaabka cusub ee GA).
Oktoobar 31, 2011 at 8:21 PM
Waxaan helay 50% taraafikada tooska ah maalmahan… wadar ahaan kudhowaad 200-300 ayaa kudhaca maalin kasta. 02% ku dhufashada tooska ah waa cusub, oo heerka soo kabashadu waa qiyaastii 60% - 70%… Ma iska caadi baa? Sababtu maxay noqon kartaa? Maxayse tahay heerkaaga kabashada?
Oktoobar 31, 2011 at 9:19 PM
Waxaan u maleynayaa in taraafikada tooska ah ee 50% ay tahay xaalad fantastik ah oo ay weheliso heerka kor u kaca ee aad qeexayso. Maaddaama bartaadu ay ku korayso caan - gaar ahaan raadinta iyo bulshada - waxaad ka heli doontaa tirooyin aad u sarreeya oo ku saabsan gudbinta iyo taraafikada raadinta, iyo heerarka sare u kaca ee aad la socotid!
Si daacadnimo ah uma qiimayn karo hal site mid kale… Waxaan kula dagaallamayaa isbeddellada duugga ah isbeddellada cusub si aan u hubiyo inaan ku soconno jihada saxda ah. Waad ku mahadsantahay wadaagida Namanyay!
Nov 1, 2011 at 6: 19 AM
Waad ku mahadsantahay jawaabta degdega ah 😀